Nividy ampaham-pananana amin’ny lalamby ny vazimba breziliana hiantsoany fa tsy nanao ny adidiny amin’ny tontolo iainana ny orinasa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Mey 2019 6:06 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, Español, Ελληνικά, Yorùbá, русский, bahasa Indonesia, 繁體中文, English
Milaza ireo vahoaka vazimba fa miantraika amin'ny fiainana dia sy mandrahona ny filaminan-dry zareo ny fanitarana ny lalamby. Saripika: Pedro Biava, nahazoana alalana.
Tamin'ny 24 avrily 2019, nahitana endrik'olona vitsivitsy tsy nampoizina ny fivorian'ireo manana petrabola ao amin'ny Rumo Logística, vondron-dalamby breziliana: vondron'olona miisa dimy avy amin'ny foko Guarani sy Tupi izay vao nividy petra-bola (actions) miisa enina ao amin'ny orinasa.
Ny tsirairay amin-dry zareo ireo dia misolo tena ireo tanim-bazimba miisa dimy ao atsimo atsinanan'ny fanjakana São Paulo voatondro ofisialy ho andalovan'ny lalamby mpitondra entana mahatratra 90 taona amin'izao fotoana izao ary iasan'ny Rumo ka nanomboka nanao fanitarana tamin'ny taona 2014. Mba ho fanonerana amin'ny fiantraikan'ny fanitarana ny lalamby, noteren'ny fanjakana ny orinasa “hanangana trano vaovao, toeram-pivavahana, tetezana iray, zaridainam-piarahamonina ary mba omena tirakitera kely maromaro ny vondrom-piarahamonina. Manodidina ny 5000 any ho any ny isan'ny olona iharan'ny fanitarana ny lalamby.
Saingy nilaza ny solontenan'ireo vazimba fa tsy nanaja ireo fifanarahana ireo ny orinasa, araka ny notantarain'ny Folha de São Paulo. Nanamafy izany filazana izany ny fampanoavana federaly: tsy najanona ny asampanavaozana 63 amin'ny 97 nifanarahana hampiasana ny tany. Nobinaikon'ny mpitsara ny Ibama, sampandraharaham-pirenen'i Brezila misahana ny tontolo iainana, tamin'ny 19 avrily, hampitsahatra avy hatrany ny fanamboarana ny lalamby sy hanaisotra avy hatrany fahazoan'ny Rumo miasa. Natosiny ihany koa ilay sampandraharaha hampandoa onitra mitentina 10 tapitrisa reais (2,5 tapitrisa dolara amerikana).
Tao amin'ny taratasy novakiana tao amin'ny fivoriana tamin'ny 24 avrily, nolazain'ireo vazimba dimy tamin'ny antsipirihany ny alahelony. Nofariparitany ny fiantraikan'ny fiaran-dalamby amin'ny fiainan-tsy tompoin'olona ao amin'ny faritra, sy ny famerana ny fivezivezen'ny olona. Ankoatra izany, nomarihan-dry zareo ihany koa ny fahasahiranan-dry zareo amin'ny fitadiavana hifampiresaka amin'ny Rumo, ary notsikerain-dry zareo ny tatitry ny orinasa fanaony isan-taona farany indrindra momba ny fampandrosoana lovain-jafy, izay ilazan'ny Rumo fa “narahiny an-tsakany sy andavany, tamin'ny fampandraisana anjara sy ny fampiatiana ireo vondrom-piarahamonina vazimba voakasika, ny adidiny“.
Nandritra ny fifampiresahana tamin'ny mpanangom-baovao Pedro Biava avy ao amin'ny gazety Brasil de Fato, nilaza i Adriano Karai, avy amin'ny foko Guarani, fa ny tanjon'ny manana petrabola vazimba dia ny mba handrenesan'ny mpampiasa volan'ny orinasa ny feon-dry zareo fa tsy hoe hahazo tombony avy amin'ny petrabola novidiany (izay novidian-dry zareo 17 reais tsirairay, manodidina ny 4,30 dolara amerikana).
Nofariparitan'i Karai ihany koa ny fiantraikan'ny fanitarana ny lalamby tamin'ny vondrom-piarahamoniny ao Tenondé, miorina ao an-tanànan'i Paralheiros:
Misy ny tabataban'ny fiaran-dalamby izay mandeha hatrany mandritra ny alina. Tsy mivoaka eny amin'ny toeram-pihazana intsony ny biby. Tsy manana alina mangina intsony izahay. Mitondra voa be dia be izay miparitaka eny amin'ny tany koa ry zareo, ary fantatray fa tsy tsara izany sakafo izany satria efa novàna atiny (gène). (…) Tandindonin-doza ihany koa ny fiainanay: manavatsava manerana ny zarataninay ny fiarandalamby, nefa amin'ny toerana andehananay an-tongotra itsidihana fokonolona (havana). Ahiana ho voadonan'ny fiarandalamby hatrany izahay, satria misy mandalo hatrany isaky ny folo minitra.”
Araka ny fitantaran'i Folha, efa nanolo-kevitra tamin'ny Rumo ny vondrom-piarahamonina vazimba tamin'ny voalohany mba hanolotra ny asa fanavaozana ho an'ny komity sahanin'ny vondrom-piarahamonina ihany. Nanaiky ny orinasa tamin'ny voalohany, araka ny nolazain'ny Biraon'ny Fampanoavana, fa niala tamin'izany tamin'ny oktobra 2018 taorian'ny nifidianana ny Filoha Jair Bolsonaro, izay naneho ampahibemaso ny tsy fitiavany sehatra vazimba teratany. Nanafoana tampoka ny fandraisany anjara fihaonana tamin'ny vondrom-piarahamonina ny Rumo tamin'ny 20 Novambra, ary tsy nipoitra intsony tamin'ny fivoriana hafa taorian'izany.
Tamin'ny firesahana tamin'ny Folha ny orinasa no nilaza fa tsy nanao sonia fifanarahana mihitsy tamin'ny vondrom-piarahamonina vazimba amin'ny hampanaovana amin'ny komitin-dry zareo ny asa fanavaozana.
Nirava tsy nisy fifanarahana ofisialy ny fihaonamben'ny manana anto-bola, saingy nilaza ny solontenan'ny Rumo fa horesahana mandritra ny fivoriana anatiny amin'(ity) volana mey (ity) ny fitakian'ny vazimba.
Nanomboka tamin'ny taona 2014 ny asa fanitarana. Manodidina ny 5000 eo ho eo ny isan'ny olona miaina ao amin'ny faritra. Saripika: Pedro Biava, nahazoana alalana.
Tsy ny Guarani sy ny Tupi ihany no niditra tamin'ny antsoina hoe “fikatrohana ara-petrabola,” ity izay tsy dia mahazatra loatra ao Brezila.
Tamin'ny taona 2010 ny mpandrindra ny tra-boinan'ny Vale (Articulação dos Atingidos e Atingidas pela Vale) nividy antobolan'ny orinasa mba ahafahana mahazo toerana ipetrahana amin'ny fivoriana.
Nahafaty olona 236 (34 no mbola nanjavona) ny Vale, iray amin'ny orinasam-pitrandrahana goavana indrindra eto ambonin'ny tany, sady mpandraharahan'ny tohodrano izay vaky tao an-tanànan'i Brumadinho tamin'ny Janoary 2019.
Tamin'ny 30 avrily, andro fivorian'ny manana petrabola, nahanton'ny mpikambana ao amin'ny Articulation tamin'ny tambohon'ny foiben-toeran'ny Vale ny afisy maro misy ny anaran'ireo olona maty, araka ny notaterin'ny gazety O Globo.
Avy amin'ny fanomezam-peo ny ahiahiny amin'ireny fivoriana ireny, voatery ny orinasa manoratra ny fitakian'ny mpikatroka ao anatin'ny horesahana. Niteny toy izao tamin'ny O Globo ny iray amin'ny mpikambana ny Articulation, Carolina de Moura, izay manana ampaham-bola ao amin'ny Vale:
Hiteny hatrany izahay. Tsy maintsy mampiasa vola amin'ny zavatra ataony ry zareo amin'ny fanatsarana ny reniranonay sy hiahy ny ain'olombelona.